Kandida 13 : Hala-bato ranofotsiny -
AccueilRaharaham-pirenenaKandida 13 : Hala-bato ranofotsiny
26/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy takona hafenina ny hosoka sy ny halatra tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa, ny 19 desambra teo, iny. Noho izany, hijoro ary hiaro ny tena safidim-bahoaka marina ny avy amin’ ny kandidà Marc Ravalomanana.
Ankehitriny, voaporofo tanteraka izao fa nanjaka ny hala-bato nataon’ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina, sy ny ekipany ary ireo mpanara-dia azy. Tazana nandritra ny fampitahana nataon’ny ekipan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, avokoa ireo hosoka nitranga tamin’ireo birao fandatsaham-bato maromaro, toa ny tao amin’ny distrikan’i Betioky Atsimo, Antananarivo Fahadimy…
Araka izany, tsikaritra avokoa ireo fikafika rehetra nentin-dRajoelina sy ny ekipany, indrindra fa ny antoko Mapar, handresena amin’ny fifidianana ka nahazoany ireo isam-bato maro sy salan’isa ambony. Ankoatra ny kara-pifidianana sy karapanondro sandoka niparitaka nandritra ny fihodinana faharoa, voaporofo ny fisian’ny bileta tokana efa vita sy voamarika mialoha. Teo ihany koa ny sonia sy lavotondro izay mitovy avokoa tamin’ny lisi-pifidianana, ny lisitry ny mpifidy efa vita sonia mialoha, ary ny tena goavana ny fitanana an-tsoratra izay mitovy avokoa ny soratra namenoana azy ireny. Tsy vitan’izay fa nisy tamin’ireo lisi-pifidianana koa no tsy mitombina ny mombamomba ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatiny, indrindra fa ny mahakasika ny daty nahaterahana. Tsikaritra ihany koa ny fahafenoan’ny vata fandatsaham-bato tamin’ny alalan’ireo bileta tokana efa voamarika.
Nipoitra ihany koa ny fanodinkodinam-bato nataon-dry Andry Rajoelina sy ny mpomba azy, ka nahazoany isam-bato betsaka tsy araka ny tokony ho izy sy tsy ara-drariny tamina birao fandatsaham-bato maromaro…
Araka izany, tsy nipetra-potsiny manoloana ireo hosoka sy halatra voatanisa etsy ambony ny avy amin’ny kandidà Marc Ravalomanana (K25) tamin’ny alalan’ny Legal Team sy ny KMMR. Noho izany indrindra, nanambara i Fanirisoa Ernaivo avy amin’ny mpanohana an’i Dada fa tsy afaka hialana sy hihodivirana ny fametrahana fitoriana eny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana, na ny HCC.
Notsindrian’ity solontenan’ny K25 ity fa hametraka fitoriana sy fangatahana fanafoanana ny vato azon’i Andry Rajoelina, kandidà laharana faha-13 tamin’ny bileta tokana tamin’ny fifidianana. Eo ihany koa ny fangatahana eny anivon’ny HCC amin’ny fialan-daharan’ny kandidà Andry Rajoelina…
Nambaran’i Fanirisoa Ernaivo hatrany mantsy fa tsy afaka ny hanaiky mora fotsiny amin’izao halatra sy hosoka mihoampampana ny avy amin’ny K25. Toraka izany koa ny vahoaka maro mpomba ny kandidà Marc Ravalomanana, izay voahodinkodina ny safidin’izy ireo nandritra iny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa iny. Noho izany indindra, tsy hanaiky ary hiady, indrindra hiaro ny tena safidim-bahoaka marina, hatramin’ny farany ny KMMR sy ny Legal Team. Hatreto mantsy, mbola manamarina ireo fitanana an-tsoratra sy ny bileta tokana ary ny lisi-pifidianana eny anivon’ny Ceni ny solontenan’ny K25.
« Tsy afaka ny hitazam-potsiny manoloana ireo hosoka sy halatra mihoa-pampana ireo izahay. Izahay koa dia hijoro hatramin’ ny farany, hiaro ny tena safidim-bahoaka marina, izay voahodinkodina”, hoy i Fanirisoa Ernaivo nanamafy.